Hlola iSicily, Italy - World Tourism Portal
Hlola iSicily, e-Italy
Okufanele ukwenze eSicily, e-Italy
Amawebhusayithi okuvakasha asemthethweni weSicily
Bukela ividiyo emayelana neSicily
Hlola iSicily isiqhingi esimangelengele nesikhangayo eningizimu yeth Italy, futhi ngesinye sezifunda ze-20 zezwe. Ihlukaniswe esifundeni esikhulu seCalabria yi-5 km Straits of Messina. Kungashisa kakhulu ehlobo, ngakho-ke kungcono ukuvakasha ngesikhathi sentwasahlobo nasekwindla, kanti kusasemnandi impela ebusika.
I-Agrigento - eningizimu futhi ikakhulukazi eyaziwa ngeValle dei Templi (isigodi samaThempeli) (UNESCO World Heritage)
ICatania - idolobha eliyunivesithi elinomatasatasa nesikhungo sezomnotho, elihle ngokuphila ebusuku, isango eliya eMount Etna (UNESCO World Heritage)
I-Gela - elinye lamadolobha asebaluleke kakhulu okudala, isikhungo se-archaelogical e sea resort ogwini oluseningizimu
IMarsala - imnyuziyamu ethokozisayo, ikhaya lewayini elidumile
Messina - idolobha eliphithizelayo futhi lixhumanisa izwekazi
IMilazzo - idolobhana elincane, ikakhulukazi elisetshenziswa njengendawo yokuhamba yeziqhingi zase-Aeolian ngeNqaba enhle.
I-Palermo - inhlokodolobha ethokozisayo, inala yokubona
I-Ragusa - ukwakhiwa kwe-baroque okuhlaba umxhwele (Amagugu e-UNESCO World Heritage)
ISyracuse (Siracusa) - amadolobha amadala amahle namanxiwa aseGreek (UNESCO World Heritage)
ITrapani - idolobha elikhangayo nesango eliya ePantelleria naseziqhingini ze-Egadi
I-Aegadian Islands - iziqhingi eziqabulayo zisogwini olusentshonalanga
I-Aeolian Islands - iqembu elihle leziqhingi zentaba-mlilo (I-UNESCO World Heritage)
I-Madonie - iMadonie National Park, iPaki kazwelonke eseStima Sicily
IMount Etna - intaba-mlilo ye-3323m ehehayo ephezulu
Mozia - Idolobha lasendulo lasePunic elakhiwe esiqhingini saseMozia elibheke iMarsala
I-Pantelleria - Isizungu esiphethwe yi-Arabhu
Iziqhingi zasePelagie - iningi eliseningizimu, eLwandle iMedithera
I-Segesta - elinye ithempeli lamaGrikhi, yaseshashalazini namanxiwa
ISelinunte - elinye iqembu lamathempeli amaGrikhi ahlaba umxhwele namanxiwa omuzi waseGrisi
I-Taormina - idolobha elihle elisegqumeni elisogwini olusempumalanga yeSisily
ISicily inomlando omude wokubuswa kwamanye amazwe, ukusuka kumaGrikhi ukuya kumaRoma, ama-Arabhu, amaNorman, ama-Aragonese. Umphumela uba yisiko elixubile lapho yonke imibuso eyodwa ishiya okuthile ukubona, ukunambitha nokuzwa.
ISisily iyisiqhingi esikhulu lapho wonke amadolobhana abonakala enamasiko awo. Uzothola amakhono amahle ahlukahlukene endawo kuwo wonke amadolobha esiqhingini.
Abomdabu baseSisily bakhuluma isiSicily, ulimi lwakudala lwesiRomance oluhlukile nolimi lwesiNtaliyane. Cishe i-30% yalelo silulumagama lesiSicily livela olimini lwesi-Arabhu.
Iningi lamaSicilian lisebenza kahle e-Italy, kanti izikole zanamuhla zifundisa abafundi isiNgisi. Yaziswa ukuthi uma uhambela amadolobhana amancane, ezinye zezakhamizi ezindala kungenzeka zingasikhulumi isiNtaliyane (ngokuvamile zizokuqonda).
Izikhungo zezindiza ezinkulu zaseSicily zisePalermo naseCatania.
ICatania yisikhumulo sezindiza esikhudlwana / esiphithizelayo, enezindiza ezifuywayo eziya ezingxenyeni eziningi ze-Italy, ezinye izindlela zomhlaba wonke kanye nezindiza eziningi ezishisayo.
I-Palermo yisikhumulo sezindiza sesibili, enezinhlobonhlobo ezinhle zezindiza ezifuywayo nezindiza zamazwe omhlaba jikelele.
ITrapani (TPS) isikhumulo sezindiza sesithathu ngokwanda kwethrafikhi kwakamuva.
Isikhumulo sezindiza iRagusa / Comiso sisikhumulo sezindiza esisha futhi kufanele sivule kungekudala izindiza eziphansi nezishisayo.
Qaphela, yize izithuthi zomphakathi zihle kakhulu phakathi nesonto, azikho izinsizakalo eziningi ngamaSonto - hlola isikhathi ngokucophelela bese ubuza abakhona.
Imigwaqo emikhulu mihle, inemigwaqo emine (iCatania-Palermo, iPalermo-Mazara neCatania-Noto engakhokhelwa mahhala neMessina-Palermo lapho kufanele ukhokhe khona). Imigwaqo emincane, ikakhulukazi ezindaweni ezisezintabeni, ihamba kancane kodwa inikeza ukubukwa okuhle.
Ungaqasha imoto ePalermo, eCatania naseTrapani nge- X 8 bese ubona indawo ezungeze amadolobha kuyo.
Ukuhamba. AmaPaki kanye ne-Nature Reserve awahlelekile kahle kepha ngenxa yalesi sizathu uzothola ithuba lokujabulela nokuthola izintaba zaseSicily neMvelo. Kunezinto ezinhle zokuhamba ongazenza ukuze ujabulele ubuhle bezindawo eziphambili zaseSisili ezinjengezintaba zeNebrodi, izintaba zaseMadonie, intaba-mlilo ye-Etna, nokuningi.
Amaflethi eSawoti eTrapani. Lapho usazobona usawoti usenziwa ngendlela yendabuko, ngokushanela usawoti ngemuva kokuphuma kwendlela, bese kuba ngumhlabathi phansi kuma-windm asendulo.
San Vito Lo Capo. Ingabe idolobha lasolwandle elidumile oGwini Olusentshonalanga, lidume ngokugcotshwa kwalo ngesihlabathi nangokwakhiwa kwamaMoorish amhlophe onezitezi ezimbili.
Erice. IsoNxweme oluseNtshonalanga futhi iyidolobha eliphakeme kakhulu eSicily, elinomuzi wasendulo odalwe ngamatshe.
Mazara Del Vallo. IsoGwini oluseNingizimu futhi yaziwa ngeKota yayo yaseTunisia.
IZingaro Reserve, isogwini olusentshonalanga yeSicily futhi yaziwa ngokuhamba kwemvelo okuhle kakhulu, amabhishi emvelo nezibonelo zesundu eselincane.
Idolobhana laseNoto, lisogwini oluseningizimu futhi liyindawo ye-Unesco World Heritage ngenxa yesakhiwo sayo esiyisibonelo seBaroque.
Iwashi elikhulu kakhulu lezinkanyezi emhlabeni neMuseo Regionale eMessina.
Njengoba yenza kangcono esifundeni sayo saseziqhingi, iSicily inenye yezindlela ezinhle kakhulu zokupha abantu emhlabeni. Ukudla okuningi kwesiqhingi kwenziwa ngezidalwa zolwandle. Ngokungafani ezingxenyeni ezisenyakatho ze Italy, ukhilimu nebhotela akusetshenziswanga neze izitsha ezejwayelekile eSicily. Esikhundleni salokho, abomdabu bavame ukufaka esikhundleni sotamatisi, i-lard (akuvamile) noma i-olive. I-cuisine imnandi kakhulu futhi inezinongo eziningi nokunambitheka okuhlukile ongakunikeza. AbaseSicilians bahlakulela uhlobo lomnqumo olungafani nolwesiSicily, abalubiza ngothando ngokuthi "saracena". Ukudla kujwayelekile eMedithera kepha kukhona izinkomba eziqinile zokunambitheka kwe-Arabhu neSpanish (iSicily yanqotshwa ngabantu abaningi phakathi nomlando wayo omude). AmaSicilian athanda izinongo futhi abe nobudlelwano obuthile ne-almond, jasmine, irosemary, iminti kanye ne-basil.
AmaSicilians adume ngokuhle ngezinyo elimnandi futhi aphakathi kwabenzi abasebenza kakhulu ama-dessert e-Italy. Zama i-'annnoli '(ama-pastry eshubhu agcwele ushizi omnandi we-ricotta),' granita '(ama-ices axutshwe nezithelo namajusi aqothulwe ngempela), kanye nokuthumela kwawo okwaziwa kakhulu ngokuthi,' cassata '(ikhekhe eliphefumlelwe isi-Arabhu). Qiniseka ukuthi ungenzi amabhisikidi zikaphayini kanye ne-almond, ngoba zihlala zithokozisa isixuku.
I-'Arancini '(kwesinye isikhathi i-Arancine), amabhola erayisi athosiwe ngokugcwaliswa, kungukudla okusheshayo kweSisilia okushibhile. Kungaba nzima ukuthola ngaphandle kweSicily, ngakho ke kuzame ngenkathi ulapho.
AmaSicilians awaphuzi amakhulu ophuzo oludakayo (iSicily inezinga eliphansi kakhulu lotshwala kulo lonke elase-Italy) yize iqiniso lokuthi lesi siqhingi siyikhaya lezivini eziningi kunanoma yisiphi esinye isifunda sase-Italy futhi sinomkhakha owodwa wezimboni zewayini ezithuthuka kakhulu e-Italy. Iphawuleka ikakhulukazi esikhathini esidlule ukuthola amawayini amaningi aqinile futhi imnandi kakhulu iMoscato neMarsala, lesi siqhingi siguqise ukugcizelela kwaso ukukhanya, kumawayini amhlophe namhlophe abomvu.
ISisily ihlukaniswe izifunda ezintathu eziyinhloko ezikhiqiza iwayini:
Isifundazwe saseTrapani entshonalanga;
UNoto noRagusa esicu empumalanga eseNingizimu.
Iewayini ezihamba phambili ezaziwa kakhulu eSicilian: INero d'Avola, Bianco d'Alcamo, Malvasia, Passito di Pantelleria, Cerasuolo di Vittoria, Etna Rosso, Etna Bianco.
AbaseSicilian bajabulela isithambisi selamula esidla ubhedu esibizwa ngokuthi yiLimoncello ngesikhathi sasehlobo eside, esishisayo nesomile.
Kunezinhlwayi eziya Naples, ISardinia, iMalta, neTunisia. Futhi, ungabamba indiza uye esiqhingini esihle saseLammusa esiseduze kwe-Afrika kuneSicily.